Ndị na-ere nri anụmanụ na ụlọ ọrụ - China ndị na-azụ nri anụmanụ
Ihe omuma Akwukwo a bu udiri ahihia nke nwere ike mezue mkpokọta, ichikota osikapa, oka na oka oka na-eme ya na Ro Hay Hay. A na-eji ya maka nchịkọta ahịhịa na-acha akwụkwọ ndụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, osikapa, ọka wit, na ọka ọka. Na-agbanye. Igwe ahụ nwere njirimara nke kọmpat, ọrụ dị mma na ntụkwasị obi dị elu. Enwere ike iji nri ahihia ahihia dika nri, chekwaa nri nri ehi na aturu. Abịa na p ...
Igwe Fellet Mill Igwe igwe pellet bu igwe eji edozi nri nke na etinyezi ihe ndi egwepia nke oka, nri soybean, ahihia ahihia, ahihia osikapa, wdg. The igwe na-emi esịnede ike igwe, gia igbe, mbanye aro, anwụ efere, pịa ala, ndepụta hopper, cutter, na orùrù hopper. A na-ejikarị ya eme ihe na nnukwu aquaculture buru ibu, ọkara na obere, osisi na-edozi nri osisi, anụ ụlọ, anụ ọkụkọ, ndị ọrụ ugbo n'otu n'otu na obere na ọkara, na ugbo ...
Ngwaahịa A na-eji igwe ahịhịa ọka ahịhịa na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ (akọrọ), ahịhịa ọka wit, ahịhịa ọka osikapa na ahịhịa ọka na ahịhịa ndị ọzọ. Ihe ndi a haziri ahazi kwesiri maka ozuzu ehi, aturu, mgbada, inyinya, wdg, ma nwekwaa ike igho ogwu, alaka, ogbugbo, wdg, maka iji ya mee ihe na ulo oru dika ike ahihia ahihia, mmeputa ethanol, ime akwukwo na osisi -nyere ogwe. Enwere ike dakọtara ya na mmanụ dizel ma ọ bụ igwe eletriki dị ka ike. Workingkpụrụ Ọrụ Thekpụrụ ...
Product ihe RYAGRI usoro ọka thresher ọtụtụ-eji anụmanụ husbandry, ugbo, na ezinụlọ ojiji. A na-ejikarị eme ya ọka na-azọcha ọka n'emebighị ọka ọka ma nwee njirimara nke usoro ezi uche dị na ya, arụmọrụ siri ike, na ịrụ ọrụ dị mfe. Dị ka mkpa nke ndị ahịa, anyị nwere ike inye threshers dị iche iche na-arụ ọrụ arụmọrụ. Ndị a threshers nwere ike site traktọ PTO chụpụrụ, nwekwara ike dakọ mmanụ dizel engines ma ọ bụ Motors. Uru 1. Igwe ahụ nwere ike ịkwaga ya na ...